धेरै संक्रामक भए पनि कम घातक हुँदै कोरोना भाइरस
एजेन्सी, २ भदौ । युरोप, उत्तर अमेरिका र एशियाका केही हिस्साामा कोरोना भाइरसको जीनमा भएको परिवर्तन अत्यधिक संक्रामक भएपनि कम घातक भएको पत्ता लागेको छ ।
नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका वरिष्ठ चिकित्सक पल टेम्बियाले संसारका केही ठाउँमा कोरोनाको D614G म्युटेशन (भाइरसको जीनमा भएको परिवर्तन) फैलिएपछि मृत्युदरमा कमी देखिएको हुँदा कम घातक भएको प्रमाण फेला परेको बताएका छन् ।
इन्टरनेशनल सोसाइटी अफ इन्फेक्सस डिजिजका नव–निर्वाचित अध्यक्ष समेत रहेका डा. टेम्बियाले भाइरस धेरै संक्रामक भए पनि कम घातक हुनु राम्रो कुरा रहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार भाइरसको जीनमा जति पनि परिवर्तन हुन्छ त्यति नै तिनीहरू कम घातक हुँदै जान्छन् । भाइरस खाना र आश्रयका लागि मानिसहरूमा नै निर्भर हुने हुँदा यसले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई संक्रमित गरेपनि मृत्यु कम हुने हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले फेब्रुअरीमा नै कोरोना भाइरसमा भएको परिवर्तनपछि थप घातक भएको कुराको कुनै प्रमाण नभएको बताएको छ ।
आइतबार मलेशियाको स्वास्थ्य विभागका डिजी नूर हिशाम अब्दुल्लाहले कोरोनाको नयाँ परिवर्तन १० गुणा बढी संक्रामक भएको हुँदा अहिले विकसित गरिएको खोपहरू प्रभावकारी नहुन सक्ने बताएका छन् ।
तर, डा. टेम्बिया र सिंगापुरको विज्ञान, टेक्नोलोजी र शोध संस्थानका सेबास्टियन मोरर–स्ट्रोडले खोपको असर कम हुनेगरी भाइरसमा परिवर्तन नहुने बताएका छन् । मोरर–स्ट्रोहले कोरोनाको विकसित गरिएको खोपमा कुनै परिवर्तन नहुने बताए ।